Ibhizinisi umqondo: ukukhiqizwa kwe iphepha izinkomishi
Ukwakha iphepha izinkomishi - lena umsebenzi othembisayo ukuthi akudingi utshalomali kokuqala esikhulu, kanye nobuchwepheshe. Phela, tableware alahlwayo uhlale ziphoqa, hhayi kuphela emadolobheni amakhulu, kodwa nasemizini emincane. Kufanele kuqashelwe ukuthi imikhiqizo yepulasitiki kancane yadedela imikhiqizo eyenziwe ephepheni. Lokhu kungenxa yokuthi i-izinto zokusetshenziswa for ukukhiqizwa zayo akuzona ayinangozi ngakho. Iphepha futhi umkhiqizo imvelo elikwaziyo zilulaza e ngokuphelele esikhathini esiyiminyaka emithathu.
Kungakhathaliseki akhiqizwa Russian iphepha izinkomishi
Iziphi izici has ukukhiqizwa iphepha izinkomishi? Ibhizinisi lokuveza izitsha ezifana uzoqala ukuze asule cishe ngokushesha. Ngempela, imikhiqizo yephepha Russian cishe kukhiqizwa. Okwamanje, azikho izinkampani ezingaphezu kuka-20 ukuthi ukukhiqiza izitsha ezifanayo. Basuke etholakala Urals, kanye abahlala engxenyeni ephakathi yezwe. Kulokhu, iningi labo wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza izibuko kwekhofi.
Nakuba izinkampani zakwamanye amazwe zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela ezahlukene ebanzi. umphakeli eyinhloko iphepha izinkomishi izinhlangano European, kanye ne-Vietnam, i-China ne-Korea.
Ahambisanayo ukuthi ibhizinisi ezifana
Ukwakha iphepha izinkomishi - kuyinto niche lutho emakethe wezwe lakithi. Ngemva kwesikhathi esithile, leli bhizinisi uzoqala ukuletha imali ngokuthi umnikazi. Lokhu kungenxa ukungabi sekuyaphela encintisana, eziningi abathengi, kanye ngonyaka-round funa. Sidinga kuphela ukufunda ubudlelwano phakathi kwaneliswe isidingo, kanye ukuthenga imishini ezidingekayo ukuze ukukhiqizwa iphepha izinkomishi kanye izinto zokusetshenziswa.
Ibhizinisi ukwenziwa iphepha tableware, kulesi simo, izinkomishi, kunezinzuzo eziningi, phakathi okuyinto ivelele:
Enterprise Mann. Zonke ukutshalwa bayobuyela umnikazi phakathi kwezinyanga 6-12.
Inani ezincane kokuqala dolobha. Ukuze uthenge izinto zokusetshenziswa kanye nemishini, kuzodinga ruble ecishe ibe yizinkulungwane 600.
The main line ukukhiqizwa uyakwazi ukusebenza izinsuku ngaphandle kokuma.
Umshini ngamandla eyanele ulakho ukukhipha ngeminithi amayunithi 50.
Ngo womshini imikhiqizo enjalo, ubuchwepheshe yesimanje isetjentiselwa kucinisekisa imikhiqizo high quality.
Izinkomishi wenza kusukela paperboard laminated. Lapho imiphetho ngomkhiqizo ngamunye awashintsheki ngu Welding ultrasonic.
Yini edingekayo ukuze inhlangano zokukhiqiza
Ngakho, indlela ukuqala ukukhiqizwa iphepha izinkomishi? uhlelo Business - lena into ebaluleke kakhulu, okuyinto yenziwa emva kokubhaliswa ibhizinisi. Lokhu ucabangela ulwazi etholakale emva yemakethe obuphelele. uhlelo Business ukucacisa kwaneliswe isidingo, thatha i niche lingenamuntu futhi ukukhomba izimbangi. Ukuqala ibhizinisi, kufanele:
Bhalisa inkampani yakho.
Khetha indlela eqondile intela.
Thola futhi uqashe izakhiwo. endaweni yayo kufanele ibe nkulu kuno-50 m 2.
Ukuthengwa imishini kanye izinto zokusetshenziswa.
Thola zonke izimvume: Kuphatsa wendawo, izicishamlilo, Ses.
Kuyaphawuleka ukuthi iziqu usizo ngokukhethekile ayinakho abasebenzi, njengoba ukwenziwa iphepha izinkomishi sisebenzisa imishini yesimanje. Ngenxa yalokhu, le nqubo iyaziqondisa ngokuphelele. Ukukhiqizwa plan onjalo kubhekwa ephephile imvelo futhi abantu.
Njengoba umkhuba ubonisa, izimpahla ezithandwa kakhulu ikhofi izinkomishi, ivolumu okuyinto amagremu 100. iziqukathi ezinjalo zivame elisetshenziswa vedingovoy ukuhweba. izinkomishi nazo ziphoqa itiye, inani okuyinto 200 amagremu. Kuyaphawuleka ukuthi izitsha ezifana ingasetshenziswa hot hhayi kuphela, kodwa futhi iziphuzo ezibandayo i-.
Ukwakha iphepha izinkomishi akunakwenzeka ngaphandle nemishini ekhethekile. izindleko kwakho kuncike izwe ukukhiqiza, kanye imodeli unit. Umphakeli eyinhloko yale mishini kuthiwa i-United States, kanye Korea, China kanye kwamanye amazwe aseYurophu. iyunithi ngalinye has izici zayo siqu.
wonke amadokhumenti asekelayo Kunconywa ukufunda ngokucophelela kokokusebenza. Ungakhohlwa ukuthi idumela imishini inkampani esikhiqiza, nalo libalulekile. Le factor futhi kufanele unake okukhethekile. Lokhu kuzosiza sithole choice of lokubolekwa. Izindleko isilinganiso mshini ruble ecishe ibe yizinkulungwane 600.
Isisetshenziswa baseYurophu China
Ngokusho kochwepheshe, umshini ukwenziwa iphepha izinkomishi, ekhiqizwa e-Europe, has ukusebenza ephakeme umthamo. Iyunithi ulakho ukukhipha ngeminithi amayunithi 250. Ngaphezu kwalokho, imishini enjalo ubhekwa kwezomnotho hhayi kuphela, kodwa futhi kuyabiza. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe mshini ruble ezingaphezu kuka-1 million.
Njengoba imishini kusuka China, akusiyo eqolo. Nokho, amayunithi babe nemibi. Esokuqala ukhwaliti ongaphakeme Yakha. Ngenxa yalokhu imishini ngokuvamile ahlahlele futhi udinga ukulungisa. Ngaphezu kwalokho, lokubolekwa nomthamo ongaphakeme futhi ziyakwazi ukukhiqiza izinkomishi imizuzu 30-80.
Kufanele kuqashelwe ukuthi imishini ukwenziwa iphepha izinkomishi zihlukile. The best yilezo ezisebenzisa Welding ultrasonic. Bayakwazi isebenze ngaphandle kokuphazamiseka kanye ngesivinini kahle eliphezulu.
Kukhona imishini ukuthi afeze ukukhiqizwa iphepha izinkomishi ngu adhesion ezishisayo. Lona elula, kodwa ngesikhathi esifanayo indlela onokwethenjelwa gluing izicucu.
Ngaphezu umshini, usomabhizinisi kuyodingeka ukuthenga esikhundleni billet. Basuke edingekayo womshini iziqukathi angusayizi ohlukile, umumo kanye nosayizi. Uma kungenjalo, uzokwazi usethe ukukhiqizwa uhlobo oluthile iphepha izinkomishi. Uma kukhona isifiso ukukhiqiza iziqukathi ngezivunulo, kunemibhalo noma ilogo, uzoba ukuthenga iyunithi ukuthi singasetshenziswa Kwanyatheliswa iphepha ethize.
Kwezinye izimo, umshini ukugaya of izinto zokusetshenziswa. Imishini enjalo Akukhona nje ukusika iphepha, kodwa futhi isheshisa inqubo yokukhiqiza izikhala ezivela indwangu obukhulu.
Iphepha ukwenziwa iphepha izinkomishi kufanele kube uqweqwe ngokwanele futhi laminated. uhlobo oluthile amakhadibhodi ubuye ezifanele. Ngakho material consumable kumele kube ngokwanele aminyene. Lesi sibalo 120-280 amagremu per 1 m2.
Esanda kutholakala yabonakala iphepha Finnish izinto zokusetshenziswa emakethe. Lokhu consumable ngokushesha kwakuqala ukwanda. Ngaphezu kwalokho, kukhona amabhizinisi yasekhaya, okuyinto zenziwa ukwenziwa laminated iphepha izinkomishi.
Lapho uthenga izinto zokusetshenziswa for inkampani yakho, sicela uqaphele ukuthi ukwenziwa amayunithi 400,000 zokukhiqiza kuzodinga okungenani 5 amathani okudlekayo.
Ingabe le venture inzuzo
Ukwakha iphepha izinkomishi - kuwumqondo omuhle kulabo abafisa ukuqala ibhizinisi, futhi ebulawa capital encane. Kuyaphawuleka ukuthi izinkampani wahlanganyela emisebenzini efana nale, hhayi okungaka. Ukukhiqizwa akuyona ovamile e-Russia. Ngakho-ke, ukubala margin kunzima kakhulu.
Isitolo, abasebenza amashifu futhi esikhiqiza amayunithi ecishe ibe yizinkulungwane 500 ngenyanga, ukuletha zabanikazi a inzuzo enkulu. Njengoba izibalo wezazi, kukhona amasha kulo ibhizinisi bangathola Iholo ngenyanga elilingana ama-ruble ayizigidi 500. Kulesi simo, inkampani recouped ngokuphelele nje 3 iminyaka. Nokho, inzuzo angaba phezulu. Empeleni, lesi sibalo incike indlela ihlelwe ukuthengiswa kwemikhiqizo isiqedile.
Ngokuzalanisa isikhuphashe njengoba ibhizinisi mncintiswano ongaphakeme futhi engenayo ephezulu
Ukuze uthole ukwaziswa on indlela yokulungisa headphones
Kungani Microsoft amabhlogo izibuyekezo-Windows 7 kanye 8.1?